Xukuumada Somaliland oo markii ugu horaysay sheegtay inay meel Marineyso Ansixinta Xeerka Bangiyada ee Muranka Badan Dhaliyey. | Maalmahanews
Xukuumada Somaliland oo markii ugu horaysay sheegtay inay meel Marineyso Ansixinta Xeerka Bangiyada ee Muranka Badan Dhaliyey.
Hargeysa(Maalmaha News):- Wasiirka Xidhiidhka Golayaasha Somaliland Cali Xaamud Jibriil, ayaa difaacay xeerka baananka ganacsiga oo walaac xoogan ka muujiyeen culimadda dalku. Isla markaana buuq ka abuuray golaha wakiiladda oo xeerkaasi horyaalo.
Wasiir Cali Xaamud Jibriil
Wasiir Cali Xaamud wuxuu sheegay in xeerkan gabi-ahaanba la joojin doonin, balse la waafajin doono shareecadda islaamka iyo distoorka qaranka.
Wasiir Cali Xaamud Jibriil wuxuu sidaa ku sheegay waraysi gaar ah oo uu siiyay Telefishanka Horn Cable Tv “Horta xaqiiqatan xeerkan baananka waa loo baahanyahay dalka, waa wax lagamarmaan ah. Laakiin xeerkan sida laga dhigayo maaha oo shareecadda islaamka wixii ka soo horjeeda xukuumadeennu ma rabto, iyadoo dadka maanta hadalhaya ee dawladu ribay wadata la leeyahay iyadoon la ogayn.
Dalkan markii la aasaasayay distuurkiisa lagu saleeyay in wixii shareecada islaamka khilaafsan in aynaan isku maamulayn oo taasi distuurka ayay ku taalla.”Ayuu yidhi Cali Xaamud waxaanu hadalkiisii sii raaciyay “Xeerkan waa xeer aynu tolaynayno oo aynu hagaajisanayno, wixii islaamkeenna iyo distuurkeenna ka soo horjeedana waynu ka saarayna, wixii aynu maamulayno ee wanaagsanna waynu ku darsanayna. Laakiin xeer la joojinayo gabi-ahaantiiba ma jirto, waayo waynu u baahannahay, caalamka la macaamil ayaynu la leenahay bangiyadda ganacsigga waynu u baahannahay, ganacsatadeenna ayaa u baahan, waxa u baahan dadka aynu la macaamillo adduunyadda kama xidhnaan karno.”
Sidoo kale, Wasiirka xidhiidhka golayaashu wuxuu sheegay inay xukuumadu ku dabataagan tahay golaha xeerka baananka“Xukuumadda maanta joogta haddii aanu nahay ee Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) hoggaaminayanna waanu ku dabataagannahay baarlamaanka, wax allaale iyo wixii distoorka waafaqsan iyo shareecadda islaamka. Waayo waa golihii sharci dajinta ayaa ku hawlan iyagu inay keenaan wixii tafaftiran oo ay ka hagaajiyaan siday imikaba uga shaqaynayaan, waanan ku dabataagannahay wixii aan khilaafsanayn shareecadda islaamka iyo distoorka.” Ayuu yidhi Cali Xaamud Jibriil